isethi Corporate of esobala films zokuzivikela for the screen kanye nezezindlu BodyGuardz Sula Okugcwele Body (2 amasethi) for BlackBerry 8220 Pearl Flip — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
isethi Corporate of esobala films zokuzivikela for the screen kanye nezezindlu BodyGuardz Sula Okugcwele Body (2 amasethi) for BlackBerry 8220 Pearl Flip
Gcina isitayela sakho eliyingqayizivele 8220 injalo yasekuqaleni! Ngokufanele eklanyelwe, ngokuphelele films esobala ukunikeza isivikelo smartphone yakho, kanye nomklamo walo uphelele uyabukeka emehlweni njengakuqala!
BlackBerry 8220 — smartphone esingavamile nge style esiyingqayizivele. Ngenxa ukusetshenziswa isikhathi eside kungakunciphisa asebenzayo kwalo bafelwe ukumelwa yayo yangaphambili zingase zibonakale imihuzuko kanye scuffs ngiyajabula wonke look. Uyabathanda BlackBerry yakho futhi ufuna ukuvikela it, kodwa ungafuni ukufihla ukumboza? Siyaqonda! Lokhu Yingakho iphothifoliyo yethu amelwe iqoqo ngokuqinile esobala films zokuzivikela for the screen kanye nezezindlu BodyGuardz Sula Full Body. Le filimu eziklanywe kahle futhi acace kahle kakhulu, wena ngeke awubone ukungakhululeki emsebenzini kanye nomklamo esiphelele smartphone yakho ozithandayo kuyoba uyabukeka emehlweni njengakuqala!
I kit kuhlanganisa iqoqo egcwele films for zonke izingxenye fixed of the machine, nse njengoba isimo sabo. It has cutouts kuzo zonke izindawo ezilungile, kuhlanganise mshini "clamshell". Banamathela ngokuphelele kufanelana ngaphansi amalebula nokuxebuka off akabashiyi izibazi. Ibhayisikobho enenhlabathi bahlanza kalula ngendwangu. Long kungenxa izinga okusezingeni eliphezulu ngokwedlulele, impahla ngokuqinile.
Ukuthenga leli phasela, uthola ezimbili nje amasethi ephelele films omuhle. Iphakethe iqukethe gel ekhethekile futhi ibalazwe ukuba kunanyathelwe.
isethi Corporate of esobala films zokuzivikela for the screen kanye nezezindlu BodyGuardz Sula Okugcwele Body (2 amasethi) for BlackBerry 8220 Pearl Flip, esobala NL-BBP8-1108 ●